A Doer, Andrew Wood, Madaxweynaha cusub ee SKAL ASIA
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » A Doer, Andrew Wood, Madaxweynaha cusub ee SKAL ASIA
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Thailand War Deg Deg Ah • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
SKAL ma dooran karin hogaamiye ka wanaagsan oo hogaamiya SKAL Asia iyo xubnaheeda ilaa wajiga ugu dambeeya ee dhibaatada COVID-19. Andrew Wood wuxuu leeyahay waxa loo baahan yahay.
"Mid naga mid ah ayaa hadda ah Madaxweynaha SKAL Asia", ayay tiri eTurboNews Daabacaha Juergen Steinmetz. Andrew wuxuu ahaa wax ku biirinaya daadajintayadan sida Thailandyadu ay sanado badan u qori jirtay waraaqaha
Goobta AGM ee Skål International Asia oo la qabtay horaantii maanta Shirweynihii Guud ee Sanadlaha ahaa ee 50aad ee Aasiya ayaa dhacay waxaana loo doortay Andrew J Wood Madaxweynaha 2021-2023.
Doorashada ka hor Wood, oo si weyn loogu tixgeliyo inuu ka mid yahay Skålleagues -ka ugu muuqda gobolka, wuxuu ahaa Ku -xigeenka Skål Asia (Koonfur -bari).
Xubin ka tirsan Skål muddo 29 sano ah ayaa markii ugu horraysay loo doortay guddiga Aasiya sannadkii 2005. Wood, oo ay ahayd inuu dhammaysto xilligiisii ​​labaad ee Madaxweynaha kooxda ugu da’da weyn Thailand-Bangkok, ayaa xilka u wareejin doona James Thurlby, Madaxweynaha cusub ee Bangkok.
Skål Asia waxay leedahay 2529 xubnood oo ku jira 39 Naadi, 28 waxay ku urursan yihiin 5 guddi qaran, iyo 11 naadi oo xiriir la leh, Skål Asia Area (SAA) waa aagga ugu kala duwan adduunka Skål. Aagga Aasiya wuxuu ka soo jeedaa Guam oo ku taal Badweynta Baasifigga in ka badan 10,000 km ilaa Mauritius oo ku taal Badweynta Hindiya oo leh naadiyo ku yaal 15 dal oo xiise leh. Aagga Aasiya ayaa leh ku dhawaad ​​boqolkiiba labaatan dhammaan xubnaha caalamiga ah ee Skål International.
“Dhammaan Asxaabtayda Asia waxaan u sheegayaa in sida Madaxweynayaal badan oo iga horreeyey aan u hoosaynayo hawsha na hortaalla, anigoo ka mahadcelinaya kalsoonida aad na siiseen.
"Waxaan weligay maanka ku hayaa 15 -ka dal ee aan ku adeeganno Skål Asia iyo baahida loo qabo in laga wada shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa xiriir adag oo saaxiibtinimo oo ku dhisan aasaaska adag", ayuu yiri madaxweynaha cusub ee la doortay Wood.
“Skålleagues -ka meel walba waxay daacad u yihiin himilooyinkii awoowayaasheen ee Farxadda iyo Saaxiibtinimada. Sidaas ayay ahayd oo waa inay la jirtaa jiilkeena cusub ee Skålleagues.
“Dhisidda buundooyinka, damqashada, iyo naxariistu waa mudnaanta koowaad. Faafida ka dib, markii waqtigu ku habboon yahay, waxaan u baahanahay inaan kacno, soo baxno oo gacmaha furanno oo iftiinku mar kale nolosheenna ku soo fataho, ”ayuu yiri Madaxweyne Wood.
Wood ayaa sidoo kale ku dhiirri -galiyay xubnihiisa inay mustaqbalka fiiriyaan yididiilo cusub, “Dhaqaalaheenna waxaa laga yaabaa inuu si xun u daciifiyo iyadoo ay sabab u tahay xuduudaha xiran. Qofna ma dhayalsan karo burburka caalamiga ah ee warshadeena. Si kastaba ha ahaatee waxay na siisay fursad naadir ah oo aan ku riixno badhanka dib -u -dejinta, si aan u tirtiro khaladaadkii hore oo aan saxno.
Wuxuu raaciyay, “Adduun cusub oo safar iyo dalxiis ah ayaa sugaya. Adduunyo cusub oo gaajaysan in la safro, taasi waa nabad, xasillooni iyo Skål Asia dhab ahaantii waa ka weyn, saaxiibtinimo iyo rajo badan. ”
Daabacaha eTN Juergen Steinmetz, oo sidoo kale ah Guddoomiyaha Shabakada Dalxiiska Adduunka wuxuu yiri: “Waxaan aqaanay Andrew sanado badan. Maaddaama uu yahay GM Hotel weyn oo Bangkok ah, wuxuu macmiil wanaagsan u ahaa eTurboNews.
“Ka dib hawlgabkiisii, wuxuu noqday mid si joogta ah wax ugu kordhiya daabacaadeena. Wuxuu kaloo ku biiray Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN) xubin ahaan. Aniga oo ah xubin SKAL ah, waxaan ku qanacsanahay in SKAL Asia ay sameysay go'aan aad u wanaagsan oo ay ku dooranayso hoggaamiye run ah, sameeye, iyo nin leh aragti.
“Hoggaankiisu wuxuu furi doonaa fursado cusub oo u dhexeeya SKAL Asia iyo Shabakadda Dalxiiska Adduunka. Andrew, hambalyo! ”
Iyada oo aysan jirin wax shirweyne ah oo ka socda adduunka Skål tan iyo markii uu bilaabmay masiibada 2 sano ka hor, Wood wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in qorshayaashu ay horeyba ugu horumareen Congress -ka Aagga Aasiya ee Skål bisha Juun 2022 markaas oo Thailand ay martigelin doonto dhiirrigelinta joogtada ah #RediscoverThailand Aagga Aasiya kaas oo la filayo inay soo jiitaan 300 oo ergo shirka 4 maalmood (3 habeen).
Madaxweynaha Skål Asia ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay, “Caqabadaha aan maanta la kulanno adduunyo cusub oo safri doonta berri, waa dhab. Waa dhab oo way badan yihiin. Ma qirayo in ay noqon doonto mid sahlan ama si dhaqso ah loo kulmi doono, laakiin waa la kulmi doonaa. Berri ayaa timid. ”
Waa maxay sababta loogu safro Hawaii hadda? Booqo waqti kale!
Goobaha Sandals: Toban sano oo aan wajahayno Kariibiyaanka
Tijaabiyey oo Tijaabiyey: Xerada Boot ee Seychelles la yaab leh
Run ma aha: Ukraine ayaa beenisay afduubka diyaaraddeeda ...
Heshiisyada sinnaanta gaarka loo leeyahay ayaa horseedaya safarka caalamiga ah iyo dalxiiska ...
IMEX | Dadka EIC & Tuulada Planet waxay noqon doontaa ...
WestJet hadda waxay u baahan tahay dhammaan tallaalka COVID-19 ee dhammaan ...
Booqashada Xarunta Madaxtooyada ee Kabul oo ay ku jiraan Taliban ...
United Airlines: Qaado jab COVID-19 ama lumo
Jamaica waxay Xaqiijisay 50+ Duulimaadyo Cusub Toddobaad kasta oo u dhexeeya Kanada ...
Raadadka Amniga ayaa ku daraya kooxda fulinta
Airbus iyo Air France waxay bartilmaameedsanayaan tamarta ugu waxtarka badan ...